Christian Karembeu Oo Shaaciyay Xidiga Ay Koreyso Masuuliyada Uu Real Kaga Tegay Cristiano Ronaldo
Abdirahman	 Nov 30, 2018
Halyeeygii hore ee Real Madrid iyo xulka qaranka Faransiiska, Christian Karembeu, ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in Gareth Bale ay koreyso masuuliyadii uu Cristiano Ronaldo faarujiyay. Kabtanka xulka qaranka Portugal oo bishii Janaayo ee…
Sababta CR7 Ugu Fiicneed Baxitaanka, Hadii Ay Real Tabeyso Iyo Maradona Oo Arimo Xasaasi Ah Ka…
Abdirahman	 Nov 15, 2018
Diego Maradona, ayaa kusoo biiray dooda xasaasiga ah ee ku saabsan ka tegitaanka Cristiano Ronaldo, ee Real Madrid. CR7 ayaa Juventus iska dhiibay bishii Janaayo ee sanadkaan, markaasi oo lagu iibsaday qiimo lacageed dhan 100 milyan oo…
Cristiano Ronaldo Oo Dhinac U Riday Dooda Ku Saabsan Inuu Kubada Ka Fadhiisanayo Waqti Dhow
Abdirahman	 Nov 10, 2018
Cristiano Ronaldo ayaa wuxuu ka dhawaajiyay in ka bixitaankiisa kubadda cagta aysan soo dhawayn, isaga oo carabka ku dhuftay inuu muddo dheer baaqi kusii ahaan doono. CR7 ayaa haatan ah 33-sano jir, kaasi oo soo maray kooxo dhowr ah, isaga…
Ronaldo Oo Sharaxaad Ka Bixiyey Sababta Aysan Man Utd Ugu Qalmin Guushii Ay Ka Heshay Juve
Abdirahman	 Nov 8, 2018
Manchester United ayaa guul soo laabasho oo cajiib ah waxay ka heshay dhigeeda Juventus, kulan kusoo dhamaaday 2-1, oo ay ku adkaatay kooxda Premier League dheesha. Red Devils ayaa goolka looga naxsaday xil uu ka dhaliyay Cristiano…
Griezmann Oo Ka Hadlay Rajadda Uu Ka Qabo Inuu Kala Dhan-taalo Dabarka Messi Iyo CR7 Ee Ballon…
Abdirahman	 Nov 1, 2018
Antoine Griezmann, waa mid kamid ah magacyadda ugu waawayn ee usharaxan inay sanad ciyaareedkan ku guuleystaan abaalamarinta wayn ee Ballon d'Or, taasi oo fasalkaan aad uga duwan kuwii hore. Wiilkaan udhashay dalka Faransiiska ayaa…
Cristiano Ronaldo Oo Fahfaahiyay Qaabta Ay U Saameysay Qoyskiisa Eedaymihii La Xiriiray Kufsiga
Cristiano Ronaldo ayaa wajahaya eedaymo ku saabsan inuu kufsaday Gabar udhalatay Mareykanka, sanadkii 2009-kii, inkasta oo uu beeniyay. iddiga reer Portugal oo ka tagay Real Madrid horaantii xagaagan, ayaa si lama filaan ah u furmay markii…
Cristiano Ronaldo Oo Digniin Culus U Jeediyay Dadka Ku Fekeraya Inay Da’da Kabada Timid
Abdirahman	 Oct 31, 2018
Weerar yahanka Juventus ayaa u sheegay dadka qaarkood ee ku fekeraya inay sarre ukac ku yimid da’diisa ay sababeyso hoos udhac ku yimaada bandhig ciyaareedkiisa, isaga oo sheegay inuu sii wadan karo xirfadiisa. “Aniga waan ka duwanahay…
Cristiano Ronaldo Oo Soo Xushay Liiska Xidigaha Uu Doonayo Inay Ku Guuleystaan Ballon d’Or Xagaagan
Cristiano Ronaldo ayaa la waydiiyay liiska ciyaartoyda uu doonayo inay xili ciyaareedkan ku guuleystaan abaalmarinta Ballon d’Or. Biladdaan oo ah midda ugu qiimaha badan aduunka ayaa waxaa usharaxan in ka badan 30 ciyaartoy, oo la kala…
Cristiano Ronaldo Oo Si Adag Uga Jawaabay Hadii Uu Dano Dhaqaale Ugu Biiray Juventus
Abdirahman	 Oct 29, 2018
Cristiano Ronaldo ayaa sheegay in udhaqaaqistiisa Talyaaniga aanu salka ku haynin dano dhaqaale, isaga oo sharaxaad ka bixiyey bixitaankiisa. CR7 ayaa iska dhiibay Juventus horaantii xili ciyaareedkan, isaga oo afka ku balaariyay inay ka…
Ronaldo Oo Dhaliil Culus U Jeediyay Milkiilaha Real Xili Uu Qiray Inuu Guulo Waawayn Ku Gaarey…
Cristiano Ronaldo ayaa ku dhaleeceeyay milkiilaha naadiga kubadda Rea Madrid inaanu si dhab ah ugala xaajoon arrimaha ku aadan sii joogitaankiisa Los Blancos. CR7 ayaa soo gabagabeeyay waayihiisa Boqorada dalka Spain horaantii sanad…